ढोरपाटनका २८ वर्षिय युवा वेपत्ता - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १३, बिहीबार ०९:२५
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ३ का २८ वर्षिय एक युवा पोखराबाट वेपत्ता भएका छन् ।
आफ्नी श्रीमतिको उपचारकालागि पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेज पुगेका ढोरपाटन -३ का जिसी ३ का २८ वर्षिय धनबहादुर जिसी एक्कासी वेपत्ता भएका हुन् ।
जेठ ७ गते साँझबाट एकाएक हराएका जिसी अझैसम्म परिवारको सम्पर्कमा नभएको जिसी परिवारले जनाएका छन् ।
वेपत्ता जिसी, यस अघि बुटवलमा खाद्यन्न सामाग्री विक्री गर्ने पसलमा काम गर्थे । उनीसँगै काम गर्ने ड्राईभर कोरोना संक्रमणपछि मृत्युभएको जिसीले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई घरमा आएपछि बताएका थिए । उनी समेत संक्रमित भई घरमा आएका तर लक्षण नदेखिएपछि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
केही दिनपछि उनकी श्रीमति विरामी हुन्छिन् । विरामी परेकी श्रीमतिको बुर्तिबाङ स्थित हिमाली मेडिकलमा केही दिन उपचार गरिन्छ । मेडिकलमा गरिएको उपचारपछि निको हुँदैन । जिसीले श्रीमतिलाई जेठ ५ गते धौलागिरी अस्पतालमा पुरयाउँछन् ।
धौलागिरी अस्पतालमा कोरोना परीक्षणपछि उनकी श्रीमतिलाई संक्रमण पुष्टि हुन्छ । श्रीमतिलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि अक्सिजन सहितको आइसियु खोजेका जिसीले त्यहाँ अक्सिजन बेड पाउँदैनन् । जेठ ६ गते विहान उनी श्रीमतिलाई लिएर गण्डकी मेडिकल कलेजमा आइसियु कक्षमा भर्ना गर्छन् ।
अस्पताल भर्ना गरेपछि, आफूलाई एक्लै उपचारमा खटनपटनमा समस्या आएको भन्दै उनका आफन्तलाई फोन गरि ७ जेठमा आफ्ना दाई र भिनाजु पोखरा पुगेपछि, साँझ खानाखाएर एकछिनपछि आउँछु भन्दै बाहिर निस्केका धनबहादुर फर्केनन् । अझैसम्म वेपत्ता छन् ।
जिसीका दाजु भानबहादुर र भिनाजु अस्पतालमा भर्ना गरिएकी विरामीको उपचार गर्दै हराएका भाईको खोजी कार्य गरिरहे । प्रहरीमा जाहेरी गरे, आफन्तलाई भने तर अहिलेसम्म अझै पत्ता नलागेको बताएका छन् ।
जेठ ७ गते साँझ अस्पतालको बाहिर खाना खाएसगैँ दाजु र भिनाजु अस्पताल भित्र बिरामीको रेखदेखको निम्ति जानुभएको थियो । केहि समयपछि बाहिर निस्कदा भाई त्यहाँ नरहे पछि खोजी गर्न सुरु गरिएको उनका दाजु भानबहादुरले बताए । सोहि दिन राति करिब १० बजेतिर आफ्नी आमासगँ कुराकानी गरेको र कुराकानीका क्रममा आफ्ना दाजु र भिनाजु पोखरा आएसगैँ आफुलाई केहि सहज भएको बताएका थिए । वेपत्ता जिसीकी आमाले वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष हेमेन्द्र घर्तिलाई यस्तो जानाकारी गराएको वडा अध्यक्ष घर्तिको भनाई छ ।
उमेरले २८ वर्षका जिसीको ढोनपा ३ पुर्कोट देउरालीमा घर छ । उनका २ छोरा, श्रीमति र आमा सोही घरमा सँगै बस्ने गरेको वडा अध्यक्ष घर्तिको भनाई छ । पोखरा गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचाररत श्रीमतिको उपचार राम्रो भएको छ । स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको उनका दाजुले बताए । वेपत्ता जीसी भने ७ जेठको राति १० वजेपछि अहिलेसम्म कसैको सम्पर्कमा आएका छैनन् । रहस्यमय तरिकाले वेपत्ता भएका उनको परिवारका तर्फबाट खाजीकार्य भने जारि राखिएको बताइएको छ ।